MADAXWEYNE XASAN: Ma shalay ayuu qaldanaa mise maanta ayuu saxan yahay?!!‏ | Radiomaanta.com
You are here » Radiomaanta.com » Faallo » MADAXWEYNE XASAN: Ma shalay ayuu qaldanaa mise maanta ayuu saxan yahay?!!‏
MADAXWEYNE XASAN: Ma shalay ayuu qaldanaa mise maanta ayuu saxan yahay?!!‏
Posted By admin On 20th June, 2014. Under Faallo, Wararka |
Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo laba sano kahor Baarlamaanka Federaalka ay u doorteen inuu Madaxweynihii ugu horeeyay noqdo muddo 22-sano ah kaddib Dowladda rasmiga ah ee Soomaaliya isla markaana dalka uu ka baxay xilligii KMG-nimada ayaa waxaa soo baxaya dhaliilo cad cad oo ku wajahan waxqabadkii ay ka sugayeen dadka iyo dalka inuu dib uga dhacay.
Inkasta oo Madaxweynaha Dowladda Federaalka dastuurka dalka u siinayo awood buuxda inuu cafin karo qof kasta oo dembiile ah isla markaana ay maxkamadi xukunto, hadana go’aanka Madaxweynaha ayaa noqday mid iska hor imaanaya, kasokow inuu buriyay go’aan Guddoomiyaha ciidamada qalabka sida uu ka gaaray dagaalyahanada Al-Shabaab.
Arrimaha lagu dhaliilay Madaxweyne Xasan Sheekh waxaa ka mid ah:
U dabacsanaanta maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab oo la ogyahay wixii dhibaatooyin ah ee ay dalka iyo dadka u geysteen, gaar ahaan aqoonyahanada, waxgaradka, siyaasiyiinta, ciidamada iyo dadka rayidka ah.
Is dhigasho dhinaca amniga ah oo si toos ah Madaxweynuhu aanu xil isaga saarin u kuur gelidda waxqabadka madaxda iyo saraakiisha hay’adaha amniga.
Xiriirka Siyaasad xumo ee dhinaca arrimaha dibadda ah.
Garabsashada xubnaha kooxda Dam-Jadiid.
Faquuqidda ama yasidda madaxda iyo Xildhibaanada Baarlamaaka ee aan ka midka ahayn Dam-Jadiid.
Halkaan laguma soo koobi karo dhaliilaha Madaxweyne Xasan Sheekh uu ku leeyahay Dowladda uu hoggaamiyo ee rasmiga lagu sheegay, balse dad badan ay qireen inay ka liidato tii Shariif Sheekh Axmed ee xilligii KMG-nimada uu dalka ku jiray.
Bulshada Soomaaliyeed qeybaheeda kala duwan, siyaasiyiin, waayo joogga iyo waxgaradka Soomaaliyeed dood uu la yeeshay Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa runta loogu sheegay inuu yahay hoggaamiye jilicsan oo aan lahayn go’aano cadcad, hase yeeshee Madaxweynuhu taasi waa iska beri yeelay.
“Ma ogi goorta shacabka Soomaaliyeed ay yeelan doonaan hoggaamiye daacad ah oo leh go’aan cad, u damqanaya dadka iyo dalka oo aan ahayn hoggaamiye jeebka uun ka buuxsada dhaqaalaha lagu yaboohayo dib u dhiska dalka iyo dadka” ayuu yiri oday 80-jir ah oo Alle uga baryay jiilka dambe inay yeeshaan nasiibka hoggaamiye wanaagsan.
Madaxweyne Xasan Sheekh markii godkiisa ay biyo ugu soo galeen isla markaana Xildhibaanada Baarlamaanka qaarkood ay ugu baaqeen inuu xilka casilo, wuxuu bilaabay dhaqdhaqaaqyo aan horay loo arag, kaasi oo ugu dambeeyay isagoo Baarlamaanka tegay, isla markaana ka jeediyay khudbad ilaa iyo iminka walaac iyo dood ballaaran gelisay Xildhibaanada Baarlamaanka.
Hadaladii uu Madaxweynaha ka sheegay Baarlamaanka waxaa ka mid ahaa: “Waxaad arkeysaan howlo badan oo sidii la rabay ama sidii aad dooneyseen u socon” hadalkaas oo kuu muujinaya in Dowladda Federaalka iyo hay’adaheeda kala duwan haddii ay Xildhibaanadu arkaan khalad wax u dhimaya dalka iyo dadka inay ka aamusaan oo aanay sheegin.
Dalkaan muddo ka badan 22-sano ayuu ku soo jiray dagaallo, musuqmaasuq, boobka hantida dadweynaha, dilka, qaraxyada iyo barakicinta shacabka, maantana haddii Madaxweynihii la soo shir tegay wax kasta oo khalad ah yaan la sheegin maxaa hagaagaya, waa su’aal hor taala Madaxweynaha doonaya in labada sano ee uga hartay xilkiisa aan la faragelin.
Khudbadda Madaxweynaha Xildhibaanadii dhageystay intooda badan si weyn ayay uga xumaadeen, ka sokow eedeymaha uu u jeediyay waxqabad la’aanta Baarlamaanka, waxayna khudbadani bansiin ku sii shubtay khilaafkii u dhaxeeyay Baarlamaanka iyo Madaxweynaha.
Arrintu si kastaba ha ahaatee Madaxweyne Xasan Sheekh haddii uu daw mooday iyo inay ku jirto maslaxadda dalka iyo dadka inuu cafinayo xitaa hoggaamiyaha ururka Al-Shabaab Axmed Godane iyo in la qariyo mas’uul kasta ee dibindaabyeeya Qaranka Soomaaliyeed, waxaan ku leenahay: ISKA DHAC ISKANA NOOLOW.
« Ciidamada Kenya oo Lamu ku toogtay shan ka tirsan dagaalyahanada Al-Shabaab
Somali-Americans leave homes, friends in Minnesota to fight alongside ISIS jihadis »